MEC SIM Card ကို Online မှ မှတျပုံတငျနိုငျပွီ - Myanmar End User
By Myanmar End User November 30, 2016 31214 views
မွနျမာနိုငျငံမှာ လောလောဆယျ အျောပရတော ၄ ခု ရှိတဲ့အနကျ Ooredoo, MPT, Telenor စသညျ့ ၃ ခုကတော့ အှနျလိုငျးမှ မှတျပုံတငျပွုလုပျလို့ရတဲ့ Webpage တှေ ပွုလုပျပေးပွီး ဖွဈပါတယျ။ ခုနောကျဆုံးတဈခုဖွဈတဲ့ MEC ကလညျးပဲ Webpage ပွုလုပျပေးလိုကျပွီ ဖွဈပါတယျ။
လောလောဆယျမှာတော့ ပွုလုပျပုံ ပွုလုပျနညျးကို တငျမပေးနိုငျသေးပါဘူး။ အကွောငျးကတော့ ကြှနျတျောစမျးဖို့ MEC SIM Card မရှိလို့ပါ။ သဘောတရားကတော့ Ooredoo နဲ့ MPT တို့ရဲ့ မှတျပုံတငျနညျးနဲ့ တူပါလိမျ့မယျ။ မှတျပုံတငျလို့ရတဲ့ Link ကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
MEC SIM Card မှတျပုံတငျရနျ စာမကျြနှာ
Ei Shwe Sin says:
30 January, 2017 at 3:48 am
Error တတ်နေပါတယ် register လုပ်လို့မရပါဘူး။
30 January, 2017 at 9:38 am
ဘယ်လို Error မျိုးလည်းဆိုတာ သိပါရစေ… http://www.facebook.com/MyanmarEndUser ကနေ စာပို့နိုင်ပါတယ်…
25 March, 2017 at 9:40 am
ပြန်ထွက်ပြီးပြန်ဝင်လိုက်ပါအပေါ် link ဖုန်းနံပါတ်၀၉……………..နဲ့ပေါ်ရင်ရပြီ
12 February, 2017 at 3:57 am
Update တော့ဖြစ်သွားပြီ။ register ဖြစ်မဖြစ်ဘယ်လိုပြန်စစ်လို့ရလဲမသိဘူး
13 February, 2017 at 4:25 am
မှတ်ပုံတင်ပြီး မပြီး စစ်ချင်တာကတော့ mec website မှာ register ပြန်လုပ်ကြည့်ပါ… တကယ်လို့ မှတ်ပုံတင်ပြီးသားဆိုရင် already register လို့ message ပြပါလိမ့်မယ်… mec ကိုတော့ ဒီနည်းအတိုင်းပဲ စစ်လို့ရပါတယ်… ဒါမှမဟုတ် Call
Center 1212 သို့လည်းကောင်း Complaint Center 3456 သို့လည်းကောင်း မေးမြန်းစုံစမ်း
20 February, 2017 at 7:10 am
what happened on Ur Link
20 February, 2017 at 7:39 am
Connection ကြောင့် ထင်ပါတယ်… ဆိုက်က အကောင်းကြီးပါ… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
20 February, 2017 at 11:52 am
Error တက်နေပါတယ် ခင်ဗျာ….. This site can”t be reached ဖြစ်နေပါတယ် ခင်ဗျာ…..
21 February, 2017 at 3:12 am
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ… Mectel ရဲ့ Website down နေပါတယ်…
21 February, 2017 at 2:30 am
မရဘူးအကို error တက်တက်နေပါတရ်
21 February, 2017 at 2:32 am
reg.mectel.com.mm took too long to respond.
21 February, 2017 at 3:11 am
21 February, 2017 at 5:41 am
Linn yan says:
21 February, 2017 at 1:19 pm
MEC မှတ်ပုံတင်ဖို့ ၀င်တာ နေ့လည်ကတည်းက လုံးဝ erro ပဲပြနေတယ် ၀င်လို့လဲမရဘူး mpt ooredoo telenor တို့ ကတော့ အချိန်မရွေးဝင်ပြီး မှတ်ပုံတင်လို့ရတယ် ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ
22 February, 2017 at 3:52 am
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ… Mectel ရဲ့ Website down နေပါတယ်… ပြန်တက်လာမယ့် အချိန်ကို စောင့်ကြည့်ပြီး Facebook ကနေ Post တင်ပေးပါ့မယ်… https://www.facebook.com/MyanmarEndUser ကို Like လုပ်ထားလိုက်ပါ ခင်ဗျာ…
Please contact us if you think this isaserver error. Thank you. တဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲရှင့် 🙁
20 March, 2017 at 4:34 am
ပြန်ကြိုးစားကြည့်ပါ… အခု ကျွန်တော် ခေါ်ကြည့်တာ အဆင်ပြေပါတယ်…
24 February, 2017 at 4:14 am
mec website kaung tay bu lar bro
24 February, 2017 at 8:23 am
ဟုတ်ကဲ့ မနေ့ကတည်းက ပြန်တက်လာပါပြီ… ကျွန်တော် Facebook page က တင်ပေးထားပါတယ်…
25 February, 2017 at 5:04 am
MEC Balance check ကိုသိချင်ပါတယ်ါ[email protected]
28 February, 2017 at 8:59 am
confirmation code လည်းပြန်မလာဘူး ဘာလို့လဲ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမှာလဲပြောပေးပါအုံး Please
28 February, 2017 at 10:10 am
Viber သုံးရင် Viber ကနေ မှတ်ပုံတင်လိုက်ပါခင်ဗျာ… လောလောဆယ် အချိန်မှာ http://www.mectel.com.mm က ဒေါင်းနေပါတယ်…
Viber ကနေ မှတ်ပုံတင်မယ်ဆို >> http://myanmarenduser.com/mec-sim-register-via-mectel-viber/
myat aung says:
5 March, 2017 at 8:38 am
online ကပြသနာတက်နေပါတယ် ဖြေရှင်းမူလဲမရှိဘူး တော်တော်လွန်တယ် Mectel
6 March, 2017 at 4:13 am
viber သုံးရင် viber ကနေ မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါတယ်… http://myanmarenduser.com/mec-sim-register-via-mectel-viber/
nin may lin viber ka lal sat pate htar tal
16 March, 2017 at 3:48 am
Error တက်နေပါသည် မှတ်ပုံတင်မ၇ပါ
16 March, 2017 at 4:54 am
1212 call center ကို အကူအညီတောင်းကြည့်ပါ…
17 March, 2017 at 6:56 am
Error တက်နေပေါတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ iAn internal server error occurredလို့ပေါ်နေပါတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
17 March, 2017 at 7:04 am
ကျွန်တော် ခေါ်ကြည့်တာတော့ ရပါတယ်ဗျ…
23 March, 2017 at 10:52 pm
MEC SIM ကို မှတ်ပုံတင် ထားတာကို ဘယ်လို Code တွေ နဲ့စစ်ရမလဲ သိချင်ပါ တယ်
28 March, 2017 at 2:15 am
1212 call center ကိုသာ မေးကြည့်ပါ… စစ်ဖို့ အော်ပရေတာက code ထုတ်မပေးထားပါ…
phyu phyu htun says:
24 March, 2017 at 6:28 am
28 March, 2017 at 2:24 am
1212 call center ကို အကူအညီလှမ်းတောင်းနိုင်ပါတယ်…
win tun than says:
Code no ရိုက်ထည့်ဖို့ကျလာတယ်
get code ကို နှိပ်ပါ… ရိုက်သွင်းခဲ့သော ဖုန်းနံပါတ်ကို Code No. ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်… အဲဒီက Code ကို ရိုက်ထည့်ပါ…
2 April, 2017 at 8:12 am
3 April, 2017 at 3:00 am
ဒီမှာ အခြားနည်းလမ်းတွေ ရှိပါသေးတယ်… ကြိုးစားကြည့်ပါ… http://myanmarenduser.com/tag/mec/
3 April, 2017 at 4:58 pm
အားလုံး အောင်မြင်တယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ MECTEl မှတ်ပုံတင်တာလွယ်ပါတယ်။
4 April, 2017 at 4:56 am
ဘယ်မှ ကိုခေါ်မရဘူး ၁၂၁၂လည်းမရဘူး
4 April, 2017 at 6:30 am
ယာယီလိုင်းပိတ်သွားပြီ ထင်ပါတယ်… အောက်ပါ link က နည်းလမ်းတွေနဲ့ မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါတယ်…
5 April, 2017 at 2:24 pm
Mec ကို အွန်လိုင်းကနေ ဘယ်လိုမှတ်ပုံတင်ရမလဲ ရွေမေတာအစီအစဉ်ကနေ registar နှိပ်တော့လည်း မရဘူး ဘယ်ကနေသွားရမှာလဲ
Change ဆိုတာကိုဘဲ ပွ နတေယျ.. ဘာမှ ဆကျမ သှား တော့ဘူး
October 11, 2017 163207 views
October 12, 2017 126353 views
February 24, 2017 76466 views
November 16, 2016 51723 views